साथीहरूसँग घडी 31
के यो सम्भव छ र भविष्यमा हेर्नको लागि सही छ र भविष्यका घटनाहरूको भविष्यवाणी गर्छ?
यो सम्भव छ तर विरलै भविष्यमा हेर्नको लागि सही छ। यो सम्भव छ कि ईतिहासको धेरै पृष्ठमा प्रमाणित छ। यो सही हुनुको रूपमा जुन एक आफ्नो फिटनेस र राम्रो निर्णय द्वारा निर्धारित गर्नुपर्दछ। एक साथीले अर्कोलाई भविष्यमा खोज्ने सल्लाह दिँदैन। भविष्यमा हेर्ने व्यक्ति सल्लाह दिन पर्खदैन। ऊ हेर्छ। तर भविष्यमा हेर्नेहरू मध्ये केहीलाई थाहा छ उनीहरूले के हेरिरहेका छन्। यदि तिनीहरूले हेरे र देखे, यो केवल भविष्यको विगतमा भयो कि उनीहरूले थाहा पाउँदा उनीहरूले के देखे थाहा थियो। यदि कसैले भविष्यमा प्राकृतिक रूपमा हेर्छ भने, उसको निरन्तरतामा कुनै खास हानी छैन, यद्यपि केहीले अपरेशनबाट कुनै फाइदा लिन सक्दछन्। हानि लगभग देख्नेहरु बाट के दर्शकले उसले देखेको हो सोच्न को भविष्यवाणी गर्न बाट आउँछ।
यदि कसैले भविष्यमा हेर्छ वा देख्छ उसले आफ्नो इन्द्रियको साथ यस्तै गर्छ, त्यो हो, यसको सूक्ष्म इन्द्रियहरू; वा उसको संकायको साथ, अर्थात् दिमागका अनुशासनहरू; र त्यसो गर्नमा कुनै खास खतरा छैन, यदि त्यसले यस भौतिक संसारसँग मिल्दछ जुन संसारलाई मिसाउने प्रलोभनमा पर्दैन। जब ऊ अर्को संसारमा देखिने कुराबाट यस संसारमा भविष्यमा हुने घटनाहरूको भविष्यवाणी गर्ने प्रयास गर्दछ, ऊ अलमल्लमा पर्छ; उसले के देख्यो त्यो बताउन सक्दैन र भविष्यमा यस भौतिक संसारमा यसको स्थानमा यो फिट हुन सक्छ; र वास्तवमा उसले देखे पनि यस्तै छ। भविष्यवाणी घटनाहरू यस भौतिक संसारमा लागू हुँदा उहाँको भविष्यवाणीहरूमा भर पर्न सक्दैन किनकि यी समय, वा ढ .्गले वा ठाउँ अनुसार भविष्यवाणी गरिएको हुँदैन। ऊ जसले देख्छ वा भविष्यमा हेर्न खोज्दछ, शिशुलाई देख्न वा यसको बारेमा वस्तुहरू हेर्ने प्रयास जस्तै हो। जब बच्चाले देख्न सक्दछ, यो एकदमै खुशी हुन्छ, तर यसले आफ्नो बुझ्ने क्षमता र यसमा देखिने कुराको न्याय गर्नमा धेरै गल्तीहरू गर्दछ। यसले वस्तुको बिच सम्बन्ध र दूरीको कदर गर्न सक्दैन। शिशुका लागि दूरी अवस्थित छैन। यसले आफ्नो आमाको नाक समात्छ र किन झुण्डो पुग्दैन किन बुझ्दैन, त्यति नै आत्मविश्वासको साथ झूण्डलाई समात्ने कोशिस गर्दछ। भविष्यमा हेर्ने व्यक्तिले घटनाहरू र कल्पनहरू ती घटनाहरू हुन लागेका देख्दछन्, किनभने संसारमा आफूले देखेको कुरा र शारीरिक संसारसँगको सम्बन्धको सम्बन्धमा उसको कुनै निर्णय छैन, र किनभने उहाँ असमर्थ हुनुहुन्छ भौतिक संसारको समय अनुमान गर्नुहोस् जुन त्यो घटनामा उसले हेर्दै गरेको सम्बन्धमा हुन सक्छ। धेरै भविष्यवाणीहरू साँचो हुन्छन्, यद्यपि सधैं पूर्वानुमान हुँदैन। अतः यो मूर्खताको कुरा हो, जसले भविष्यवाणी वा भित्री इन्द्रियको प्रयोग गरेर भविष्यमा ध्यान खोज्नेहरूको भविष्यवाणीमा निर्भर हुन्छ किनभने ती कुन भविष्यवाणीहरू सहि हुनेछन् भन्न सक्दैन।
प्राय जसो "भित्री विमान" वा "सूक्ष्म प्रकाश" कहलाइने भविष्यवाणीमा निर्भर हुनेहरूले उनीहरूको एउटा बहुमूल्य अधिकार गुमाउँछन्, त्यो हो कि उनीहरूको आफ्नै न्याय। किनभने, धेरै चीजहरू र आफ्नै लागि परिस्थितिहरूको न्याय गर्न को लागी धेरै गल्तीहरू गर्न सक्छन्, उसले मात्र सिकेर सही न्याय गर्नेछ, र उसले आफ्नो गल्तीबाट सिक्छ; जबकि, यदि उसले अरूको पूर्वानुमानमा निर्भर रहन सिक्छ भने, ऊ कहिल्यै न्यायसंगत हुँदैन। भविष्यमा हुने घटनाहरूको भविष्यवाणी गर्ने व्यक्तिसँग भविष्यवाणी गरिए जस्तै निश्चित हुने निश्चित हुँदैन किनकि भविष्यवाणी गरिएको भावना वा संकाय अन्य इन्द्रियहरू वा संकायहरूसित सम्बन्धित छैन। त्यसकारण जसले केवल देख्दछ वा मात्र सुन्छ, र त्यो अपूर्ण छ, र उसले जे देख्यो वा सुनेको भविष्यवाणी गर्ने कोसिस गर्छ, केही हिसाबले सही हुन सक्छ, तर उसको भविष्यवाणीमा भरोसा गर्नेहरूलाई भ्रममा पार्छ। भविष्यका घटनाहरूको भविष्यवाणी गर्ने एक मात्र निश्चित तरिका भनेको होशियारी वा आफ्नो संकायलाई बौद्धिक रूपमा प्रशिक्षण दिने भविष्यवाणी गर्नेको लागि हो; त्यो अवस्थामा प्रत्येक अर्थ वा संकाय अरूसँग सम्बन्धित हुनेछ र सबै यति परिपूर्ण हुन्छन् कि तिनीहरू यत्तिको यथार्थताका साथ प्रयोग गर्न सकिन्छ जुन एक मानिस आफ्नो इन्द्रियलाई आफ्नो कार्य र यस भौतिक संसारको सम्बन्धमा प्रयोग गर्न सक्षम छ।
प्रश्नको अधिक महत्त्वपूर्ण अंश हो: के यो सहि छ? मानिसको वर्तमान अवस्थामा यो ठीक छैन, किनकि यदि कुनै व्यक्तिले आन्तरिक इन्द्रियहरू प्रयोग गर्न सक्दछ र तिनीहरूलाई घटना र शारीरिक संसारको अवस्थासँग सम्बन्धित गर्न सक्षम गर्दछ भने, यसले उसलाई आफू बस्ने मानिसहरूका बीचमा अनुचित फाइदा दिनेछ। भित्री इन्द्रियको प्रयोगले एक व्यक्तिले अरूले के गरेको छ भनेर बुझ्न सक्षम गर्दछ; जसको अवलोकनले निश्चित रूपमा निश्चित परिणामहरू ल्याउँदछ किनकि हावामा एक बलको टसिंगले यसको पतनमा परिणत गर्दछ। यदि एकले बल फ्याँकेको देख्यो र यसको उडानको घुमाउरो अनुसरण गर्न सक्षम भयो, र अनुभव छ भने उसले कहाँ अनुमानित हुन्छ भन्ने बारे सही अनुमान लगाउन सक्छ। त्यसोभए, यदि कसैले शेयर बजारमा वा सामाजिक सर्कलमा वा राज्यको मामिलामा के भइरहेको छ भन्ने कुरा हेर्न भित्री इन्द्रियहरू प्रयोग गर्न सक्दछ भने, उसले निजी हुन चाहेको कुराको अनुचित फाइदा कसरी लिने भनेर जान्ने थियो र यस्तो आकार दिन सक्छ। उसको क्रियाकलापले उनी आफैलाई फाइदा पुर्‍याउँछ जसलाई उनी रूची थिए। यसको अर्थ ऊ निर्देशक वा मामिलाका शासक बन्ने थियो र उनीहरुको फाइदा लिन र नियन्त्रण गर्न सक्थ्यो जसलाई आफु जस्तो शक्तिको अधिकार थिएन। त्यसकारण कुनै व्यक्तिले भविष्यमा हेर्नु र भविष्यमा हुने घटनाहरूको सही पूर्वानुमान गर्नु ठीक हुनु अघि उसले लोभ, क्रोध, घृणा र स्वार्थ, इन्द्रियको अभिलाषालाई पन्छाएको हुनुपर्छ र आफूले देखेको र भविष्यवाणी गर्ने कुराबाट प्रभावित हुँदैन। सांसारिक थोकको अधिकार वा प्राप्तिको चाहनाबाट ऊ मुक्त हुनुपर्दछ।